Arsenal Oo Bixinaysa Lacagta Lagu Bur-Burin Karo Xiddig U Ciyaara Roma, Waa Xiddig Ay U Baahantahay – Wararka Ciyaaraha Maanta
May 19, 2019 kooxda Premier League, Wararka Maanta 1
Kooxda Arsenal ayaa isku diyaarinaysa in ay iska xoojiso dhanka daafaca inta lagu jiro suuqa kala iibsiga xagaaga kadib markii ay kaliya hal kulan oo kaliya shabaqeeda ilaashatay horyaalka premier League xilli ciyaareedkii dhamaaday.
Arsenal ayaa lagu soo waramayaa in ay isku diyaarinayso in ay bixiso lacagta 36 milyan ee euro ee lagu bur-burin karo heshiiska daafaca kooxda Roma ee Kostas Manolas inkasta oo ay tartan kala kulmayso kooxda Roma.
Daafaca dhexe ayaa sidoo kale lala xiriirinayaa kooxaha premier League ee Manchester United & Tottenham Hotspur kuwaas oo doonaya adeegiisa inta lagu jiro suuqa xagaaga.
Wargayska The Sun ayaa sheegaya in ay kooxda Arsenal indha-idheeyayaal u dirtay xiddiga reer Greek bilihii la soo dhaafay iyada oo haatana go,aansatay in ay bixiso lacagta lagu bur-burin karo heshiiskiisa.
Heshiiskiisa haatan ayaa dhici doona xagaaga 2022 waxana ay kooxdu kula jirtaa wadahaladalo heshiis cusboonaysiin ah sidaas darteed Arsenal ayaa loo baahan yahay in ay si deg-deg ah u bixiso lacagta lagu bur-burin karo heshiiskiisa.
Juventus ayaa sidoo kale la dhacdsan qiimaha lagu bur-burinayo heshiiska xiddiga iyaga oo u doonaya badalka Andrea Barzagli kaas oo ciyaaraha ka fadhiisan doona dhamaadka xilli ciyaareedkan.
adduunyo,labo daafac oo giriik ah arsenal xagay gaynayaan.